Nero Burning ROM Free 2014-15.0.03300 Portable (190Mb) ဖိုင်ခွဲ4ဖိုင် 1 ဖိုင် (50Mb) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Nero Burning ROM Free 2014-15.0.03300 Portable (190Mb) ဖိုင်ခွဲ4ဖိုင် 1 ဖိုင် (50Mb)
Posted on December 1, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	တောင်းဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Free Version လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Install လုပ်နည်းကတော့သူငယ်ချင်းတို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးမပြောလိုတော့ပါဘူး။Free စစ်စစ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် Win 8 / Win7/ Vista/ XP အားလုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဓါတ်ပုံတွေ ၊ အခွေတွေထဲထည့်ပြီး Slide Shows ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ အောက်မှာပုံတွေနဲ့ပြထားပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပါဝင်လုပ်ဆောင်ချက်တွေတော်တော်များပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ (190Mb)ရှိတဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ဖိုင်4ဖိုင်ခွဲပေးထားပါတယ်။ 1 ဖိုင်မှာ (50Mb) ရှိပါတယ်။တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်သူတွေအတွက် တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖိုင်တွေပြန်ပေါင်းရမယ်ဆိုတာမသိသေးသူများအတွက် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာလည်း ဘယ်လို Install လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပုံလေးတွေနဲ့ ထပ်မံပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Nero Burning ROM 2014 is the gold-standard disc burning engine. Rip audio CDs; convert audio files; burn and copy reliable and secure CDs, DVDs and Blu-ray Discs(TM); create disc images; or burn DVD-Video, BDMV, and AVCHD compilations. Withahuge experience in optimizing CD, DVD and Blu-ray Disc(TM) burning you can rest assured that any disc recorder drive will be supported by Nero and you get the highest quality disc burning every time. နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့ Features တွေကတော့..
Copy CDs, DVDs and Blu-ray Discs™ Recording on up to 32 different recorders simultaneously Span large files efficiently across multiple discs, automatically Create auto-starting discs Burn DVD-Video, BDMV, and AVCHD compilations Rip audio CDs and convert music files Copy Audio CDs with CD-Text ယနေ့မှစပြီးကျွန်တော်ဆိုဒ်ကိုလာလည်တဲ့ User တွေအတွက်ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲရာတွင်အခက်အခဲမရှိအောင်မည်သည့် Skip မှကြားခံထားခြင်းမရှိပါ။ ဆော့စ်ဝဲများကို တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ သို့ပါသောကြောင့်ပြန်လည်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြော်ငြာများကို တစ်ကြိမ်လောက်သာ ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။
တိုက်ရိုက်ဒေါင်းရန်- ဖိုင်ဆိုဒ် (190Mb) ဖိုင်ခွဲ4ဖိုင် 1 ဖိုင် (50Mb) Part 1 | Part2| Part3| Part4www.mm-knowledge.com
← IDM VERSION 6.18 BUILD9+ PATCH	ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများ (၂) →